Maxay yihiin ajandayaasha maanta hor yaalla kulanka golaha shacabka? | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Maxay yihiin ajandayaasha maanta hor yaalla kulanka golaha shacabka?
Xildhibaanada golaha shacabka ee barlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in kulankooda la hor geeyo laba ajande oo kala ah akhrinta koowaad ee wax ka bedelka Sharciga Burcad Badeedka iyo dib u-eegista miisaaniyadda dalka ee sanadkan 2020-ka oo dood ay ka yeelanayaan xildhibaanadu.
Golaha wasiirrada Soomaaliya ayaa dhamaadkii bishii October ee sanadkii hore waxay ansixiyeen ku tala galka miisaaniyadda dowladda ee sanadkan 2020-ka, taas oo dhan 469.5 Milyan oo dollar-ka Mareykanka ah.
Kulanka la filayo in xildhabaanada golaha shacabku ay maanta yeeshaan kii ka horeeyey waxay yeesheen maalinkii Sabtida ee bilaawgii todobaadkan, waxuuna ajandihiisu ahaa ka doodista arrimaha doorashooyinka dalka, sida lagu baahiyey fariin loo diray xildhibaanada.
Hasa yeeshee ajandihii kulankaas ayuu guddoonku mar qura u bedelay in cod loo qaado xukuumaddii dalka, waxay natiijadiisu noqotay in guddoonku ku dhawaaqo daqiiqado gudahood in kalsoonidii lagala noqday Ra’iisul wasaare Kheyre iyo xukuumaddiisa.
Maxay yihiin ajandayaasha maanta hor yaalla kulanka golaha shacabka? was last modified: July 29th, 2020 by Admin
Isimada Puntland oo bilaabay dadaalo lagu dhex dhexaadinayo Saciid MD Deni iyo Karaash